Fampiasana sy valiny amin'ny asa sosialy madinidinika | Martech Zone
Fampiasana sy valiny amin'ny asa sosialy madinidinika
Zoma, Septambra 30, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
CrowdSPRING dia namoaka ity sary ity amin'ny fahazarana amin'ny haino aman-jery sosialy. Raha vao nahita ny statistika tamin'ny fampiasana aho dia somary gaga aho fa ambany ny statistikan'ny fampiasana ny orinasa kely. Diniho lalina kokoa ary heveriko fa tsy mahagaga izany. Tena loharanom-pahalalana tokoa ny fitantanana orinasa kely mahomby ka ny fihazonana ny fisian'ny media sosialy dia mety ho fanamby.
Izany dia nilaza - fotoana iray tsy mampino ho an'ny olon-kafa izay manana orinasa kely. Mampiseho izany fa saika tsy misy fifaninanana any! Manomboka bilaogy ary tompao ny tsenanao. Midira amin'ny media sosialy ary ampioreno ny mpihaino anao. Tsy hanodinkodina ny orinasanao mandritra ny alina io, fa fampanjariam-bola izay hahomby. Mety maharitra herinandro, mety ho amam-bolana… fa mila mandray anjara ianao. Raha tsy manao izany ianao dia hanao izany ny mpifaninana aminao.
Logo sy famolavolana sary nataon'ny crowdSPRING
Ny fiakaran'ny dokam-barotra amin'ny finday
Sep 30, 2011 ao amin'ny 5: PM PM
Azo antoka fa manana fampahalalana marobe mahaliana ity… statistika iray na izany aza, amiko, toa tsy dia mahasarika tokoa ny stat izay 51% amin'ireo mpampiasa facebook dia mazàna mividy ny vokatra marika arahiny na mpankafy azy ireo.
Marina? 51% ihany? Raha heverintsika fa tsy miraharaha ireo ambiny, dia tsy maninona izany. Fa ahoana kosa raha mihevitra isika fa ny ambiny dia tena TSY MAIN'NY vokatra? Tsy dia tsara loatra io isa io tamin'izay.
Hieritreritra manokana aho fa ho avo kokoa izany, satria ny ankamaroan'ny olona dia mety hanaraka marika izay efa tiany. Amin'ny lafiny inona, misy dikany tokoa ve io stat io? Manaraka ny marika azonao vidina ianao, mazava ho azy. Ka inona ny fototr'io? Azo inoana ve fa hividy izy ireo vokatry ny maha-mpankafy azy manokana amin'ny facebook? Raha izany dia midika zavatra izany.
Saingy heveriko fa tsy hisy fomba handrefesana an'io. Ka, araka ny fijoroany, tsy mino aho fa tokony hisy hamaky betsaka an'io isa io.
Mar 26, 2012 amin'ny 4: 39 AM
Azo antoka fa manana fampahalalana mahaliana be dia be ity